जनतालाई घरभित्रै थुनेर मन्त्रीलाई तलब खुवाउन कर तिर भन्न सुहाउँछ अर्थमन्त्रीज्यू ? – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/जनतालाई घरभित्रै थुनेर मन्त्रीलाई तलब खुवाउन कर तिर भन्न सुहाउँछ अर्थमन्त्रीज्यू ?
काठमाडौं । विश्व मानव अस्तित्व रक्षाका लागि संघर्षरत छ । विश्वभर फैलिएको कोरोनाभाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि संसारभरका सरकार प्रयासरत छन् । नेपाल पनि कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि जुधिरहेको छ । कोरोनाभाइरस संक्रमण नफैलियोस् भनेर विश्वभरका देशले जस्तै नेपालले पनि लकडाउन गरेको छ ।
लकडाउन घोषणा भएको मंगलबार ७१ औं दिन भएको छ । गत चैत ११ गतेबाट सुरु भएको लकडाउनका कारण सबै गतिविधि ठप्प छन् । लामो समयको लकडाउनका कारण व्यापार, व्यवसायदेखि सबै सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक लगायतका गतिवधि ठप्प प्राय छन् । जसले गर्दा निम्न र मध्यम वर्गीय नागरिक अभावमा परेका छन् । खानपानको व्यवस्थासमेत नहुँदा उनीहरुमा मानसिक समस्या बढ्न थालेको विज्ञहरुले बताउन थालेका छन् ।